Waxaan ku takhasusnay
- Jar iyo tol wax soo saarka
Ruidesen waxa ay ku takhasustay horumarinta iyo soo saarista dhar ka samaysan dharka fudud ee carruurta sida surwaalka gaaban iyo funaanadaha ilaa dharka dadka waaweyn ee casriga ah sida dhar-bajamada. Waxaan leenahay koox naqshadeeye xirfad leh, baayacmushtariyaal iyo khadka isku xirka.
Wax cusub iyo jawaab degdeg ah
Waxaan sii wadeynaa isbeddelada ugu dambeeyay ee dharka iyo naqshadeynta. Weydiimahaaga, waxaanu ku siin doonaa jawaab degdeg ah waxaanan kuu soo qaadan doonaa qiimo tartan ah haddii ay tahay heerka dalbashada ama wax cusub.
si habsami leh oo habaysan
Waxaan leenahay shaqaale ku hadla Ingiriisiga oo yaqaan waxaad ula jeeddo iyo waxaad u baahan tahay, waxaad ku kalsoonaan kartaa qorshahaaga gaarsiinta.
Maxaynu u shaqaynaa ama noo dooranaynaa?
Dharka waxaa lagu soo saari karaa oo kaliya khibrad farsamo iyo dareen xooggan oo naqshadeyn ah, laga bilaabo naqshad ilaa bakhaar. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad si xikmad leh u doorato soo saarahaaga.
Shijiazhuang waxay leedahay warshado badan oo xirfad leh iyo shaqaale xirfad sare leh oo magaalada ah. Sidaa darteed, waxaanu dooranay inaanu dejino saldhigayaga hawlgalka ugu weyn halkan. Waxaan leenahay shaqaale warshado ah oo ka badan 100 iyo qaabab kala duwan oo la sameeyo sanad walba in ka badan 120 iyo in ka badan 20 sano waayo-aragnimo dharka ah.
Waxaan ku haynaa in ka badan 10 shaqaale ah warshad noo gaar ah oo u heellan soo saarista tijaabada iyo muunadaha wax-soo-saarka ka hor.
Waxaan rajeyneynaa in saamiga la dhammeeyo sida ugu dhaqsaha badan. Sida ugu dhakhsaha badan ee aan muunad u samayn karno, badeecooyinka wanaagsan ee aan samayn karno rubuc kasta. Kooxaha muunada waxay caadi ahaan buuxin karaan muunado dhar ah oo la yaqaan toddobaad gudihiis. Haddii dharka muunada ah ay adag tahay in la helo, waxay qaadan kartaa waqti dheeraad ah. Badeecadahayada ayaa kula socodsiin doona goorta shaybaarkaagu diyaar noqon doono.
Qaabka iyo muunadeynta
Shaqaalaha qolka muunada ayaa si buuxda ugu qalma samaynta muunada. Haddii aad doorbidayso inaad soo gudbiso qorshahaaga, tani runtii way fiican tahay. Qolka muunada waxa uu leeyahay software lagu akhriyo inta badan faylalka dhijitaalka ah.
Sababtoo ah waxaan nahay shirkad soo saarta dharka oo buuxa, muunado iyo wax soo saar badan ayaa ah heshiis xirmo. Waxaan bilaabi doonaa muunad ka dib marka aan ku heshiino iibsadaha dhammaan shuruudaha, sida qiimaha iyo waqtiga bixinta. Marka aan ku kalsoonahay inaan si wadajir ah u bilaabi doono mashruuca waxaanan samayn doonaa muunado badan intii suurtagal ah si loo helo badeecada saxda ah ee saxda ah.
Soo saaraha dharka oo buuxa
Waxaan nahay shirkad soo saarta dharka oo buuxa. Tani waxay ka dhigan tahay in aanu masuul ka noqon doono wax kasta, oo ay ku jiraan soo iibinta alaabta ceeriin, caddaynta, muunad samaynta iyo wax soo saarka tirada badan.